Bavale umgwaqo bekhala ngentuthuko | News24
Bavale umgwaqo bekhala ngentuthuko
Amaphoyisa eqaphe isimo ngemuva kokuba umphakathi kade uvale umgwaqo.PHOTO: lethiwe makhanya
UMPHAKATHI wasendaweni yaseSnathing udinwe wavala umgwaqo ongenela kule ndawo ngoLwesibili mhla zingama-25 kuMandulo (September) ukhala ngokungalethelwa izidingo zawo.
Ngokuthola kwe-Echo lo mphakathi uqale ukuvala lo mgwaqo ngezintatakusa zangawo uLwesine kwaze kwalamula ukufika kweMeya yomasipala uMsunduzi uMnu Themba Njilo kanye namaphoyisa kwayimanxa behlakazela.
Phakathi kwezinye zezinkinga lo mphakathi okhala ngazo kubalwa khona ukungabikhona kwamanzi, isimo somgwaqo esingagculisi kanye nezindlu zangasese ezingekho esimweni .
Ilunga lomphakathi elikhulume ne-Echo kodwa langathanda ukudalulwa igama lithe into ebacasula kakhulu ukuthi abatshelwa lutho kule ndawo negzinto ezenzekalayo ngisho noma sezilungsiwa abatshelwa ukuthi seziyalungiswa.
“Sekunezinyanga singenawo amanzi kule ndawo kanti futhi akekho umuntu ositshelayo ukugthi kwenzakalani.
Sizwa sekuthiwa seluqaliswe uhlelo lokulungiswa kwamanzi kodwa ikhansela lethu alikaze lafika lasitshela ukuthi udaba lwamanzi luyalungiswa.
Imigwaqo esihamba kuyona inemigodi igeleza amanzi uma linetha.
Abanye bagcwalelwe izindlu zangasese abalutholi usizo azimonywa bahleli nazo zinjalo ngoba ayikho into abazoyenza.
Sikhathele nathi manje sifuna ukubona intuthuko endaweni yethu ngobaphela siyavota njalo,” usho kanje .
Ikhansela lakule ndawo uMnu Sipho Madondo uthe bahlanganile nomphakathi bawuchazela ngodaba lwamanzi ukuthi into asebeqalile ukuyilungisa.
“Inkinga abebekhala ngayo kakhulu udaba lwamanzi kodwa sibachazelile ke ukuthi leyonkinga isiqaliwe iyalungiswa kanti futhi siyathemba ukuthi ngenyanga kaLwezi aban- tu bonke bazobe sebekwazi ukuthola aman- zi.
Ezinye izinkinga ezifana nomgwaqo umasjpala uxoxisane nabo ukuthi zihamba kanjani futhi zizolungiswa kanjani,” kubeka uMnu Madondo.